Hladká lepenka, Archivbox, archivace, kancelář, pořadače - အခမဲ့ပရီမီယံဂီတ themes များစျေးကွက် downloads,
HomeEMBAချောမွေ့ကတ်ထူပြား, Archivbox, သိမ်းဆည်း, ရုံး, ဖိုင်များ
ချောမွေ့ကတ်ထူပြား, Archivbox, သိမ်းဆည်း, ရုံး, ဖိုင်များ	မှတ်ချက် Leave
EMBA ဒါဟာတာရှည်အစဉ်အလာများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတာဝန်ရှိချဉ်းကပ်မှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူတစ်ခကျြကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်စက္ကူကုသနဲ့လုံးဝပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပစ္စည်းများမှာထုတ်လုပ်၎င်း၏အော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ။ ယင်း၏ထုတ်ကုန်မှတဆင့် EMBA လည်းနိုင်ငံအများအပြားအတွက်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းအမွေအနှစ်များ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့စတေယျ။ အဓိကဒေသဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့န်ထမ်းများအတွက်ရေရှည်တည်တံ့ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံအလုပ်လုပ်အခြေအနေများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဖြစ်ဒေသတွင်းလူမှုရေးတည်ငြိမ်မှုကိုမှအလှူငွေများအတွက်တာဝန်ယူမှုကို၎င်း၏တာဝန်ရိပ် မိ. အဖြစ်။
Firma sklízí mnoho tuzemskýchဈzahraničníchocenění za přínosတစ် kvalitu výrobků archivaci တစ် optimalizuje kvalitu ဈvýkon produkce hladkých lepenek k ။ Společnost EMBA zakoupila pákovýchpořadačůkancelářskýchvýrobu na linku ။ Firma byla certifikována podle mezinárodní normy က ISO 9001 Lloyd မှတ်ပုံတင်မည်společností။
Firma EMBA spol ။ ro့Paseky nad Jizerou Jizery řekyKrkonošskéhonárodního parku တစ်chráněné oblasti Jizerskéဟောရိ v údolí - území dvou chráněnýchoblastí na leží။ Tato je nejen významnýmturistickým, ale ဈsportovnímstřediskemzimníchsportů oblast ။
ကကတ္တရာစေးစက္ကူစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့်အခါကုမ္ပဏီ၏သမိုင်း၏အစအဦး, ဒီနှစ် 1882 မှပြောပြတယ်။ ပထမဦးဆုံးထုတ်ကုန်အဖြူရောင်လက်ဖြစ်ကတ်ထူပြားခဲ့သည်။ လာမည့်ကာလအတွက်ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုဒေသများ၏ချဲ့ထွင်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးသမိုင်းမှတ်တိုင်များအညိုရောင်ကတ်ထူပြားများနှင့်မိုးသည်းထန်စွာကြမ်းတမ်းသောကတ်ထူပြားများထုတ်လုပ်မှု၏အကောင်အထည်ဖော်မှုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ 1971 ခုနှစ်တွင် 1989 ဒုတိယဘုတ်စက်လည်ပတ်လေးကို manual ကတ်ထူပြားစက်တွေများအတွက်အစားထိုးအဖြစ်ခဲ့သည်, ပထမဦးဆုံးအလိုအလျှောက်samosnímacíဘုတ်အဖွဲ့စက်တပ်ဆင်ပေးခဲ့သည်။
အားလုံးစာရွက်စာတမ်းများပြည့်စုံသိမ်းဆည်းပေး Archive စနစ်၏ကုမ္ပဏီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများတွင်သိသာထင်ရှားသောမဟာဗျူဟာမြောက်ခြေလှမ်း။ လက်ရှိတွင်ကုမ္ပဏီအဘယ်သူ၏ထူးခြားမှုအဓိကအား LUXOR အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းကြောင့်ရုံးနှင့်ကျောင်းထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, ၎င်း၏အကွာအဝေးကိုတိုးချဲ့နေပါတယ်။
ISO ကို 9001: 2000 Společnost EMBA SRO obdržela v roce 1998 certifikátsystémuřízení jakosti က ISO ။ V ကို roce 2009 byla recertifikována Systems က ISO 9001 na: 2018, kterýdává jasnou informaci ဏúrovnizabezpečenířízeníတစ် kvality společnosti့။ Kvalita တစ်úroveňvýrobků byla současně ohodnocena řadouoceněnítuzemskýchဈzahraničníchတစ် Worldstar Roku jako například Obal ။ V ကို roce 2003 jsme získaliprávoဋužíváníochrannéznámky Ekologicky šetrnývýrobek hladkou lepenku ze sběrovéhopapíru (nad 225 g / m2) တစ်ဦးvýrobky z ni လိုလားသူarchivnísystémy na, krabice တစ်pořadače။
Důraz na kvalitu našichvýrobků Tim spojený servis လိုလားသူ vas ဈneustálá snaha býtဏ jeden krok předkonkurencí Nam umožňujíúspěšněpůsobit nejen v tuzemsku ့trzíchsvětových na ale အဖြစ်။ Spokojenézákazníky jsme tak našlijiž 15 zemíchceléhosvěta v ။ Odborné znalosti တစ်vysoká kvalifikace našichpracovníků jsou လိုလားသူnašezákazníkyzárukou spolehlivosti တစ် kvality jak PRI výrobě lepenky, tak PRI výroběfinálníchvýrobků။ 9001 zajišťujemekomplexní celek poskytujícíလိုလားသူ vas dokonalýzákaznický servis: spojenícertifikací podle normy က ISO 2008 ့့။ Chceme za vas převzítkompletnípřípravuတစ်následněvýrobuobalů။
ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူ, သငျသညျငါတို့သည်သင်တို့၏စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းပြုပါလိမ့်မယ်, ကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်သင့်အလုပ်များကိုရှောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
Friendly and ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့သိသာတာဝန်ဖြစ်ပါသည်
EMBA သည့်ကုသိုလ်ဖြစ်နှင့်လူမှုရေးများတွင်သိသိသာသာပါဝင်ပတ်သက်သည်။ ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏နယ်နိမိတ်ကိုကျော်လွန်လှုပ်ရှားမှုများမှဒေသခံအင်အားကြီးတွေနဲ့လူမှုရေးအရအကျိုးရှိသောစီမံကိန်းများ၏မြှင့်တင်ရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်။
EMBA ယှဉ်ပြိုင်များ၏ဒေသဆိုင်ရာပတ်ပတ်လည်တူညီသောအခွင့်အလမ်းတွေကို, မသန်စွမ်းတန်းတူအခွင့်အလမ်းများကိုအလုပ်သမားစျေးကွက်နှင့်တက်ကြွစွာနှင့်အတူလူလူ့အဖွဲ့အစည်းသို့၎င်းတို့၏ပေါင်းစည်းမှုအထောက်အကူပြုခွင့်ပြုသူကိုအလုပ်ရှင်များတစ်ဦးဂုဏ်သတင်းအမျိုးသားရေးပြိုင်ဆိုင်မှုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Paseky nad Jizerou လက်ျာဘက်၌Jizerskýသတ္တုတွင်းအပေါ် Jizera ၏နယ်စပ်အပေါ်အနောက်တိုင်းကကြီးမားသောတောင်တန်း၌, Liberec ချက်ဒေသအတွက် Semily ခရိုင်အတွင်းရှိတောင်ရွာဖြစ်ပါတယ်။ 252 မြို့သားတို့ကဒီမှာအသက်ရှင်သောသူ, အိမ်များနှင့်အခြားအဆောက်အဦးများ၏ပမာဏယနေ့အပန်းဖြေနေထိုင်ဝတ်ပြုကြလော့။ မြှို့နယ်၏မြောက်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း PLA အဧရာတောင်တန်းအတွက်အဓိကလူနေအိမ်ယူနစ်၏တောင်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပါအဝင်ဧရာမတောင်တန်းအမျိုးသားဥယျာဉ်ပိုင်။
ရွာ၏ပထမဦးဆုံးစာဖြင့်ရေးသားဖော်ပြထားခြင်းအဆိုပါ 1713 ကနေလာပါတယ်။
အဆိုပါရွာဖြစ်ကောင်း 16 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ ရာစု, အသက်အကြီးဆုံးစံချိန်ယခုနှစ် 1654 မှသို့သော်ပြန်စတငျရ။ အသက်အကြီးဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသူတို့ကအချိန် glassworks မှာဘယ်မှာ Makov, ငွေတူးဖော်ရာHavírnaဖြစ်ခဲ့သည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, လူ့လှုပ်ရှားမှုနှင့်အသစ်ခုတ်အနီးဆုတ်ခွာသစ်တောများသည်အဘယ်သူ၏နေထိုင်သူများအများအပြားကိစ္စများတွင်ရက်ကန်းခဲ့ကြသည်ပိုပြီးအိမ်များထင်ရှား။ , မူရင်းသစ်တောနယ်မြေများမှကျောက်တုံးများကယခုရှုတ်ထွေးလိပ်ခေါင်းအတွက်အာရုံစိုက်နေကြသည်။
1789 အတွက်ဘုရားကျောင်း 1791 Pasekáchပုံမှန်ကျောင်းပညာရေးစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေသခံကျောင်းကဂီတ, ပြဇာတ်ရုံ, ရွာ၏စာပေနှင့်အထွေထွေယဉ်ကျေးမှုအသက်တာ၏ကြွယ်ဝသော Initiative ဖွစျလာသူအမျိုးသားရေးပြန်လည်နိုးကြားရေး, cantor Josef Simunek နှင့်သူ၏လက်ထောက်Věnceslav Metelka သင်ပေးတယ်။ တစ်ဦး autodidact အဖြစ်Věnceslav Metelka တယောထုတ်လုပ်သူလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်ဒါခေါ်ဧရာမတယောကျောင်းမှပေါ်ထွက်လာရာကနေဘိုးဘွားတယော-အောင်အစဉ်အလာ, တည်ထောင်ရသေး Genera Pilar Špidlenနှင့် Vedral တစ်ကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အချိန်ဂီတအစဉ်အလာPaseckýတယောဆရာFrantišek Vedral ကာတွန်းကား, ဒါပေမယ့်နှောင်းပိုင်းတွင်စုတီးဝိုင်းနှင့်အပျော်တမ်းပြဇာတ်ရုံပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ခုနစ်ဆယ် 20 ၌တည်၏။ ရာစုနှင့် St. များ၏ရွာများတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ ခမညျးတျော Wenceslas MD ။ Ladislav Kubicek ။ 1980 ခုနှစ်တွင် 30 Paseky နှစ်စဉ်ဂီတပွဲတော်များစည်းရုံးကတည်းကယခု 1990 အဖွဲ့ဝင်များကျော်ရှိပါတယ်သောဘုရားကျောင်းစိန့် Wenceslas Choral Society ၏ choir ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့; သံစုံတီးဝိုင်း Choir အများအားဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂီတသမားဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခြင်း။
အဆိုပါရွာလက်တွေ့ကျကျဝတ္ထု Karel Vaclav Rais အဝေးမှမျိုးချစ်၏ setting ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဇာတ်လမ်းကို 40 အတွက်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ 19 နှစ်ပေါင်း။ အထဲတွင်ရာစုနှင့်တိပ်ခွေMetelkovýchဖန်တီးခြင်းအတွက်Pozdětín, Rais အမည်ပြောင်းရိုးရာpísmáctví၏အကျင့်ဘဏ္ဍာအမှတ်တရများအပေါ်ကိုဆွဲငင်။
ဖော်ပြရန်နံပါတ်များနှင့် 1869 မြို့သားတို့နှင့်အတူမှတ်ပုံတင် 212 အိမ်မှာရှိကြ၏အခါတစ်နှစ် 1710 ၏အထွတ်အထိပ်ရောက်ချိန်တုန်းကအကြီးမားဆုံးဂီတအဖွဲ့။ အခြေချပြီးနောက်တဖြည်းဖြည်းနောက်တဖန်စဲသွားတော့။ အဆိုပါ Sudetenland ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်မြူးနစ်သဘောတူညီမှုဂျာမနီမှသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်ပြီးနောက်အခြေချ Pasek အမြဲနီးပါးသီးသန့်ခကျြခဲ့ပေမယ့်။ ဒေသခံများက Pasek တိုက်ရိုက်ထိမိသို့မဟုတ်ဂျာမန်၏ Post-စစ်ထုတ်ပစ်ခြင်းသော်လည်း, အမြဲတမ်းနေထိုင်သူများနှင့်အပန်းဖြေတစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်အိမ်တွင်းအများစုတက်ဝယ်ရှိခဲ့သည်။ ပြည်နယ်လယ်ယာများ၏စောင့်ရှောက်မှုအတွက် Meadows တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျစ်လျူရှုစက်ယန္တရားများပျက်စီးခဲ့သည်။ 1979 ခုနှစ်တွင်ဖျက်သိမ်းနှင့်ကျောင်းPasekáchခဲ့သည်။
Center ကရွာ: Buďárceအပေါ်ထိုင်ခုံစာတိုက်နှင့်မြူနီစီပယ်ရုံးစားသောက်ဆိုင်နှင့်တည်းခိုခန်းထားခဲ့တယ်။ စိန့် Wenceslas အသင်းတော်ကိုနောက်ကွယ်မှယခင် parsonage ၌တရားအောက်မေ့ဖွယ်အဝေးမှမျိုးချစ်။
Sokol ကျွမ်းဘားကလပ်Pasekách 1896 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ နှစ်များတွင် 1936-1938 စစ်ပွဲဒေသခံတစ်ဦးယဉ်ကျေးမှုစင်တာဖြစ်လာခဲ့သည်ပြီးနောက်သူကိုdružebníhoတညျးဟူသော built Sokol Sokol နှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ တော၌ Sokol ခန်းမ၌ built နှင့်သဘာဝပြဇာတ်ရုံခံခဲ့ရသည်။ ကွန်မြူနစ်စစ်အစိုးရကလှုပ်ရှားမှုများ Sokol ရပ်တန့်နှင့်ရပ်ရွာအသက်တာ၏အထွေထွေကျဆင်းမှုရှိခဲ့သည်ပြီးနောက်လှုပ်ရှားမှုများ၏ခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံး, Paseckého 1952 အတွက်အပတ်စဉ်ဂီတနှင့်ပြဇာတ်ရုံပွဲတော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ကချက်ကိုစလိုဗက်စစ်တပ်ငှားရမ်းထားသည့်အခါ Sokol 1967 အတွက်မီးရှို့ကြ၏။ လောလောဆယ် (2008) 100 အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အားကစား, ဂီတနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူအပေးအယူကျော်ဒေသခံတစ်ဦးတီဂျေ Sokol, ဖွဲ့စည်းသားသမီးရဲ့နွေရာသီစခန်းတွေမှာဖြစ်တယ်, ဒါပေါ်ရွာသန့်ရှင်းရေးနှင့်ပါဝင်။
Pasekáchအတွက် 1888 ကတည်းကလည်းစေတနာ့ဝန်ထမ်းမီးသတ်တပ်ဖွဲ့လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ အတိတ်ကာလများတွင်ဒေသခံမီးသတ်သမားဘောလုံးဖွဲ့စည်းများနှင့်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်အရက်ဆိုင်ဦး luthiers အတွက်အရက်ဆိုင်ဦးSoukupůအတွက်အပျော်တမ်းပြဇာတ်ရုံကစားခဲ့ပါတယ်။ 1931 အတွက်သူတို့ Havirna လွတ်လပ်သောအသင်းတော်ကနေမီးသတ်သမားဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ထို့အပွငျ 2010 ဒေသခံအားကစားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များကိုစုစည်းရာစည်ပင်သာယာလူထုအသင်းအဖွဲ့ Paseka ပြင်ပလူတစ်ဦးအတွက်အလုပ်လုပ်နေကတည်းက။
ယခုနှစ် 1976 1990 မဟုတ် Paseka လွတ်လပ်သောမြို့တော်စည်ပင်က, ဒါပေမယ့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကတည်းက Rokytnice။ အဆိုပါကျေးလက်ဒေသသက်တမ်းတိုးအစီအစဉ်အတွင်းသိ 1991 Paseky ခုနှစ်တွင်နှင့်ဤအစီအစဉ်၏မူဘောင်အတွင်းများ၏ဇုန်စီမံကိန်းအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်အတည်ပြုခဲ့ပြီး Paseky nad Jizerou.
အဆိုပါရွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ Wood က FUKNER, Ltd. , ကတ်ထူပြားများနှင့် paperboard EMBA, Ltd. နှင့်သိုးခြံ Belfry တစ်ထုတ်လုပ်သူ။
ဒေသခံသမိုင်းပြတိုက်ကိုနောက်စိန့် Wenceslas များ၏ဘုရားကျောင်းနှင့်Buďárceအပေါ်စားသောက်ဆိုင်ဆန့်ကျင်ဘက်ယခင် rectory အတွက်အဝေးမှမျိုးချစ်ထံအပ်နှံသည်။ အဆိုပါပြတိုက်အတွက်လှုပ်ရှားမှုများ luthier နှင့်စာရေးVěnceslava Metelka နှင့်စာရေးဆရာ Karel Vaclav Rais, 19 အတွက်ဒေသခံ Highlander ၏ဘဝထံအပ်နှံသည်။ ရာစုတယောချမှတ်ခြင်းနှင့်ယက်လုပ်ခြင်း။ အဆိုပါအောက်မေ့ဖွယ် 1958 ၏ rectory ၏မြေညီထပ်, ဒေါက်တာကးနေဖြင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည် 1975 နှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ Jaromír Jech, ကျွမ်းကျင်သူနှင့်ထုတ်ဝေသူ Metelkova အလုပ်။ ထိတွေ့မှု၏ 1978 အထက်အထပ်တိုးချဲ့ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပြတိုက်လက်ရှိတွင်ဧရာတောင်တန်းအမျိုးသားဥယျာဉ်၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ကျရောက်ပါတယ်။
ကျေးရွာအများအပြားကျေးရွာများနှင့်ဘက်မှာအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားမြောက်မြားစွာသောတောင်ပေါ်တဲဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ တဦးတည်း cadastral ဧရိယာပါဝင်သောတစ်ရွာလုံး။ ကစာရင်းအင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသောသုံးများ၏ရွာများတွင်အခြေခံပညာအုပ်ချုပ်ရေးယူနစ်: Paseky nad Jizerou, Havírnaနှင့် Makov ။ ချိုင့်Havírenskéhoအတွက်Havírnaအဆိုပါချွတ်အခြေချခြောက်သွေ့တဲ့ထိပ်တန်းတောင်ဘက် Hromovka ထိပ်တန်းမြောက်ဘက် Mechovice (803 မီတာ) stream နှင့်တောင်ကုန်း, Piave အဖြစ်လူနေအိမ်က်ဘ်ဆိုက်များပါဝင်ပါသည်, Lomičkaစသည်တို့ကို Makov ချိုင့်၌မြှို့နယ်၏တောင်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထဲတွင်အခြေချ Makovsky စီး။ Hořenskoဟုခေါ်တွင်အများအပြားနှင်းလျှောစီး LIFT နှင့်တောင်စောင်းနှင့်အတူမြို့အနောက်မြောက်ဘက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, Javorníka (822 မီတာ) Tomšováဟုခေါ်သည်တောင်ပေါ်၏အရှေ့ပိုင်းအခြမ်းအပေါ်အိမ်၏အုပ်စုတစု။ ဘယ်အချိန်မှာTomšováအနီးရှိလမ်းတစ်ရှေးခေတ်အရက်ဆိုင်သို့မဟုတ်ပုတီးအပေါ် Prdku ဆိုလိုတာပါ။ အဆိုပါရွာတောင်ကုန်း Hromovka (916 မီတာ) White ကရော့ခ် (ထိပ် 957 မီတာအနီးရွာ site ကို 964 မီတာပေးသည်) နှင့်Kapradník (910 မီတာ) နှင့်အခြေချအတူမြောက်ဘက်သတ္တုတွင်း၏သစ်သားဧရိယာ (အများအားဖြင့် Spruce သစ်တောများ) တို့ပါဝင်သည် Jizera ချိုင့်၌ Zabyly ။ ရွာ၏နိမ့်ဆုံးအမှတ်ကိုအဆင့် Jizera 476 မီတာဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါရွာ Jizerou များ၏နယ်မြေနှင့်အတူအရှေ့၌, မြူနီစီပယ် Zlata Olesnice နှင့်မြို့ Jizerou Harrachov ၏အမြစ် (ဋ။ ဦး။ Rejdice, Dul နှင့်Polubný) အနောက်မြောက်ဘက်ဧရိယာနှင့်အတူအနောက်ဘက်တွင်ကပ်လျက်ပင်ဖြစ်သည် Rokytnice ( K. U ။ အောက်ပိုင်း Rokytnice), အမြင့်မား nad Jizerou (ဋ။ ဦး။ Sklenařice) ၏နယ်မြေ၏တောင်ဘက်နှင့်ဗဟို Jablonec nad Jizerou.
ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်, contact form ကိုသုံးပါ။
← ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အစိုင်အခဲပျဉ်ပြားနှင့်အ Binder ရောင်းချခြင်း
Archivbox သိမ်းဆည်း →